अनावश्यक रौँ हटाउन…कोलगेट….यसरी प्रयोग गनुृहोस्….! – Gorkhali Dainik
अनावश्यक रौँ हटाउन…कोलगेट….यसरी प्रयोग गनुृहोस्….!
October 4, 2020 194
काठमाडौँ । अनुहारमा अनावश्यक आएको रौँले अनुहारको सुन्दरतालाई मानौँ गायब नै गरिदिन्छ । सुन्दर र राम्रो अनुहार त सबैलाई मनपर्छ । पुरुषको अनुहारमा रौँ आउनु सामान्य मानिन्छ ।
यसले उनीहरुको सुन्दरतामा खासै परिवर्तन आउँदैन तर महिलाहरुको अनुहारमा रौँ आउनु आपदको कुरो हो । हरेक कोही चाहान्छन् यदि उनीहरुको अनुहारमा अनावश्यक रौँ छ भने स्थायी रुपमा नै खतम भओस् । किनकी सुन्दर र राम्रो बन्न् सबैलाई मनपर्छ । तर यी अनावश्यक कपाल आएमा अनुहारको सुन्दरता एक सेकेन्डमा नै खतम हुन्छ ।
धेरुैजसो मानिसहरु यसबाट पिछा छोडाउनको लागी वैक्सिन्ग को सहारा लिन्छन् । तर यनिीहरुलाई यो गर्न बहुतै गा्रहो हुन्छ । त्यसैले यो बारम्बार गर्नु पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले महिलाहरु यस समस्याबाट उम्किन विभिन्न कोशिश गर्दछन् । र ब्यूटी प्रोडक्टको पनि आफ्नो अनुहारको समस्याको लागी प्रयोग गर्दछन् जुन थोरै समयको लागी उनीहरुको समस्यालाई समाधान गर्दछ ।
तर त्यही समस्या फेरी ठुलो समस्या बनेर आइपुग्छ । यस्तो अवस्थामा महिला आफ्नो समय र पैसा दुवै खर्च गर्नपनि पछि पर्दैनन् । कहिलेकाँही त यी ब्युटी प्रोडक्टले अनुहारलाई नोक्सान पनि गरेको हुन्छ ।
यदि तपाई अनावश्यक रौँले आत्तिनुभएको छ भने तल दिएको घरेलु उपचारलाई अपनाएर अनावश्यक रौँबाट तुरुन्त छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ । यसले न सिर्फ अनावश्यक रौँलाइृ हटाउँछ यसले अनुहारको सुन्दरतालाई बढाउने पनि काम गर्छ ।
तपाईलाई हामी बताउँछौँ कि यस उपायलाई अपनाउनको लागी केवल तपाईलाई एक कोलगेट र एवरयूथ पील मास्क प्याक को आवश्यक पर्दछ । यदि तपाई कोलगेटमा पनि ह्वाइट पेस्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो झनै उत्तम हुनेछ ।
यस उपायलाई अपनाउनको लागी सबैभन्दा पहिले तपार्य एउटा कचौरामा पानी लिनुहोस् । र त्यसमा १ चम्चा एवरयूथ पील मास्क हाल्नुहोस् र फेरी त्यसमा एक चम्चा कोलगेट लिनुहोस् र दुवैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् ।
यसपछि तपाई अङ्गको हिस्साबाट अनावश्यक रौँ हटाउन चाहानुहुनछ वहाँ यस पेस्टलाई लगाउनुहोस् । र करिब २० मिनेटसम्म यसरी नै रहन दिनुहोस् ।
जब २० मिनेट पुरा हुन्छ पुरा सबै तरिकाबाट सुख्छ र यसलाई तपाई देद्यनसक्नुहुन्छ कि एउटा पातलो स्किन बोक्रा जूतो देखिन्छ जसलाई तपाईले सजिलै तरिकासँग निकाल्न सक्नुहुनेछ । यस उपायलार्य गर्नमा तपाईलाई कुनै पनि तक्लिफ हुँदैन । र यसपछि तपाईको अनावश्यक रौँ पनि त्यस ठाउँमा दुबारा आउने छेन ।
Prev“नमुछे आमा दहीमा टीका”…रचना रिमालको आवाजमा पुनः रेकर्ड भयो..!
Nextपरपुरुषसँग लागेको भन्दै श्रीमानले खुवाए दिसा…..
खुशिको खबर देशैभरिका शिक्षकहरुका लागि आयो अत्यन्त जरुरी सूचना ! सबैले पढ्नै पर्ने !
नेपालमै भयो यस्तो, ड’ रलाग्दो डढेलो, अहिलेसम्म ८६ जनाको मृ,त्यु,
बर्दियामा बाघको फेरि आ”क्र,म,णबाट पुलिसराम को मृ;त्यु (6864)
प्रचण्ड पत्नि सिता दाहालको अवस्था अ’त्यन्तै ग’म्भीर,(हेर्नुस तस्बिर )